विप्लव नेतृत्वको नेकपाको प्रतिक्रिया : सरकारले युद्धको घोषणा गर्‍यो :: PahiloPost
विप्लव नेतृत्वको नेकपाको प्रतिक्रिया : सरकारले युद्धको घोषणा गर्‍यो
13th March 2019, 12:52 pm | २९ फागुन २०७५
नेत्रविक्रम चन्द। फाइल फोटो
काठमाडौं : नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारले प्रतिवन्ध लगाएपछि मुलुकको राजनीतिक अवस्था के हुन्छ त? कुनै समय हिंसात्मक आन्दोलनका सहयोद्धाको नेतृत्वमा रहेको पार्टीलाई अपराधिक गतिविधि भन्दै प्रतिवन्ध लगाउँदा त्यसको प्रभाव कहाँकहाँसम्म जोडिन्छ? द्वन्द्वबाट भर्खरै शान्तिको बाटोमा हिँडिरहेको नेपाली राजनीतिसामु यी प्रश्नहरु उठ्नुले देशको पछिल्लो स्थितिलाई संशयपूर्ण अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधि अपराधिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारले अपराधीका रुपमा व्यवहार गर्ने तय भएपछि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्छ त? पहिलोपोस्टको यही प्रश्नमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक नेताले 'सरकारले युद्धको घोषणा गरेकाले त्यसको प्रतिवाद गर्ने' बताए।
नेकपाका पोलिटव्यूरो सदस्य मोहनकुमार कार्कीले पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा भने, 'सरकारले षड्यन्त्र गरेर युद्धको घोषणा गरेको हो। सरकार नै युद्ध चाहन्छ भने हामी प्रतिकार गर्न तयार छौं।'
कुनै समय एकीकृत नेकपा माओवादीमा सहकार्य गरेका नेताहरु पछिल्लो कदमले आमने सामने भएका छन्। यही समूहबाट टुट्ने र जुट्ने क्रममा प्रचण्ड नेतृत्वमा एउटा दल यतिखेर सत्तामा राज गरिरहेको छ। अर्को समूह भने पटक पटक टुटफुटपछि सत्ताविरोधी खेमामा रहेका छन्।
तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट टुक्रिएर मोहन वैद्य ‘किरण’ को नेतृत्वमा २०६९ सालमा नेकपा–माओवादी गठन भएको थियो।
प्रचण्ड पक्षधरका नेता कार्यकर्ताले वैद्यको पार्टीलाई 'ड्यास माओवादी' भन्दै व्यङ्ग्य गर्थे। प्रचण्डले क्रान्तिलाई धोका दिएको र जनवादी क्रान्तिका लागि भन्दै ४० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य लिएर वैद्यले पार्टी फुटाएका थिए।
वैद्यबाट अलग्गिएर नेकपा माओवादीको १ फागुन, २०७३ मा रोल्पामा भएको सातौं महाधिवेशनबाट पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेपाल
कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो जसको नेतृतव विप्लवले गरे। गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचन बहिस्कार गरेको विप्लव समूहले ठाउँठाउँमा हिंसात्मक घटनासमेत घटाएको थियो। तत्कालीन देउवा सरकारले गराएको निर्वाचनका क्रममा हिंसात्मक घटना बढेदेखि नै विप्लव र विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताहरु प्रहरी निगरानीमा थिए।
अहिले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लागएसँगै फेरि देशमा आशान्ति हुने शंका धेरैले गर्न थालेका छन्। ‘हामी शुरुमा बैचारिक युद्ध गर्छौं। तर, सरकारले नै युद्ध गर्ने चाहेको बुझियो। हामीले हाम्रो तयारी गरेका छौं। सरकारले निषेध गरेर केही हुँदैन जनताले हामीलाइ निषेध गरेका छैनन्,' नेता कार्कीले भने, 'जनयुद्ध त पहिले नै लडियो अब त्यसलाई आधार बनाएर आउँछौं।'
शान्ति प्रकृया नै भंग गर्न खोजेको नेता कार्कीको आरोप छ। ‘प्रचण्डजीले पनि सोच्नुपर्ने कुरा थियो। उहाँका पनि मुद्दा छन्। यसरी शान्ति प्रकृया टुङग्गोमा कसरी पुग्छ?’
विप्लव नेतृत्वको नेकपाको प्रतिक्रिया : सरकारले युद्धको घोषणा गर्‍यो को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।